शीर्षकमा बाइबल पदहरू: कृतज्ञ -> राम्रो चरित्र
राम्रो चरित्र: [कृतज्ञ]
सतर्क भएर धन्‍यवादसहित स्‍थिर भई प्रार्थनामा लागिरहो।
२ कोरिन्थी 2:14-15
 तर परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रीष्‍टमा सधैँ विजयको निम्‍ति डोर्‍याउनुहुन्‍छ, र उहाँको ज्ञानको सुबास्‍ना हामीद्वारा हरेक स्‍थानमा फैलाउनुहुन्‍छ। किनकि उद्धार पाइरहेकाहरू र नष्‍ट भइराखेकाहरूका माझमा पनि हामी परमेश्‍वरको निम्‍ति ख्रीष्‍टको सुबास्‍ना हौं,
तर म त धन्‍यवादको स्‍तुतिसहित तपाईंमा बलिदान चढ़ाउनेछु। मैले जे भाकल गरेको छु, सो म पूरा गर्नेछु। उद्धार परमप्रभुबाटै हुन्‍छ।”
१ थिस्सलोनिकी ५:१८
सबै परिस्‍थितिमा धन्‍यवाद देओ, किनकि ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्‍वरको इच्‍छा यही हो।
 ख्रीष्‍टको शान्‍तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्‍य गरोस्‌। साँच्‍चै, तिमीहरू त्‍यसको निम्‍ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्‍यवादी होओ। ख्रीष्‍टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्‍ततासँग वास गरोस्‌। पूरा बुद्धिमानीसाथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्ती देओ, र परमेश्‍वरप्रति आफ्‍नो हृदयमा रहेको कृतज्ञतासाथ भजन, स्‍तुति र आत्‍मिक गान गाओ। कुरा वा काममा जे-जे गर्छौ, सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्‍वर पितालाई धन्‍यवाद चढ़ाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर।
१ कोरिन्थी 15:57
तर परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस्, जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टद्वारा विजय दिनुहुन्‍छ।
उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्‍यवादसाथ पस, र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्‍दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्‍यवाद चढ़ाओ, र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर।
१ इतिहास 16:34
परमप्रभुलाई धन्‍यवाद देओ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्‍छ, उहाँको प्रेम सदासर्वदा रहिरहन्‍छ।
किनकि परमेश्‍वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्‍यवाद नै चढ़ाए, तर तिनीहरू आफ्‍ना विचारमा बेकम्‍मा भए, र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्‍यारो भयो।
कुनै कुरामा चिन्‍तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्‍यवादसहित तिमीहरूका बिन्‍ती परमेश्‍वरमा जाहेर होऊन्,
स्‍तुति गाएर म परमेश्‍वरका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, र धन्‍यवाद चढ़ाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु।
२ कोरिन्थी ९:१५
उहाँको वर्णन गर्न नसक्‍ने वरदानको निम्‍ति परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस्‌।
१ थिस्सलोनिकी ५:१६-१८
 सधैँ आनन्‍दित रहो। निरन्‍तर प्रार्थना गरिरहो। सबै परिस्‍थितिमा धन्‍यवाद देओ, किनकि ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्‍वरको इच्‍छा यही हो।
ज्‍योतिमा सन्‍तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्‍याउनुहुने पितालाई धन्‍यवाद चढ़ाओ।
हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्‍वर्गबाट हो, यो वरदान ज्‍योतिका पिताबाट आउँछ। बदली रहने छायाजस्‍तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन।
कुनै अश्‍लील कुरा, मूर्ख बातचीत अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नू, यी सुहाउने कुरा होइनन्‌। तर बरु धन्‍यवाद दिने काम होस्‌।
“तिमीहरूले परमप्रभुको निम्‍ति धन्‍यवाद बलि चढ़ाउँदा त्‍यो ग्रहणयोग्‍य हुने गरी चढ़ाओ।
हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर्‌, र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी—
जब दानिएलले त्‍यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्‍नो घरको माथिल्‍लो तलाको कोठामा गए, जहाँ झ्‍यालहरू यरूशलेमतिर खुला थिए। पहिलेजस्‍तै तिनी दिनमा तीन पल्‍ट घुँड़ा टेकी परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे।
सबै सङ्कष्‍टमा परमेश्‍वर शरणस्‍थान  परमप्रभुमा धन्‍यवाद चढ़ाओ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्‍छ, उहाँको करुणा सदासर्वदा रहिरहन्‍छ।
सधैँ सबै कुराका निम्‍ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्‍वर पितालाई धन्‍यवाद चढ़ाओ।
सङ्गीत-निर्देशकको निम्‍ति “पुत्रको मृत्‍यु” को रागअनुसार दाऊदको भजन  हे परमप्रभु, मेरो पूरा हृदयले म तपाईंको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईंका सबै आश्‍चर्यकर्महरूको वर्णन म गर्नेछु।
माथिका कुरामा मन लगाओ। पृथ्‍वीमा भएका कुरामा होइन।
ख्रीष्‍टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्‍ततासँग वास गरोस्‌। पूरा बुद्धिमानीसाथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्ती देओ, र परमेश्‍वरप्रति आफ्‍नो हृदयमा रहेको कृतज्ञतासाथ भजन, स्‍तुति र आत्‍मिक गान गाओ।
तिनीहरूले परमेश्‍वरको अचूक प्रेमको निम्‍ति, र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्‍चर्य कामका निम्‍ति उहाँलाई धन्‍यवाद चढ़ाऊन्‌।
तपाईंका धार्मिक नियमहरूका खातिर मध्‍यरातमा तपाईंमा धन्‍यवाद चढ़ाउन उठ्छु।
भन्‍न लागे, “हे परमप्रभु परमेश्‍वर सर्वशक्तिमान्, हामी तपाईंलाई धन्‍यवाद चढ़ाउँछौं, जो हुनुहुन्‍छ र जो हुनुहुन्‍थ्‍यो, किनभने तपाईंले आफ्‍नो ठूलो सामर्थ्‍य हातमा लिनुभयो र राज्‍य गर्न थाल्‍नुभयो।
परमप्रभुको प्रशंसा गर। परमप्रभुमा धन्‍यवाद चढ़ाओ, किनकि उहाँ भला हुनुहुन्‍छ, उहाँको करुणा सधैँभरि रहन्‍छ।
यसकारण हल्‍लाउन नसकिने राज्‍य पाएकोमा हामी कृतज्ञ होऔं। त्‍यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्‍वरलाई ग्रहणयोग्‍य हुने आराधना चढ़ाऔं।
 सबै सङ्कष्‍टमा परमेश्‍वर शरणस्‍थान  परमप्रभुमा धन्‍यवाद चढ़ाओ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्‍छ, उहाँको करुणा सदासर्वदा रहिरहन्‍छ। परमप्रभुले छुटकारा दिनुभएकाहरूले यसै भनून्‌— जसलाई उहाँले शत्रुहरूका हातबाट मोल तिरेर छुटाउनुभयो,
२ शमूएल २२:४९
उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहुन्‍छ। मेरा शत्रुहरूमाथि तपाईंले मलाई उच्‍च पार्नुभयो, हिंसक मानिसहरूबाट तपाईंले मलाई छुटाउनुभयो।
१ थिस्सलोनिकी १:२
हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्‍तर स्‍मरण गर्दै हामी परमेश्‍वरलाई तिमीहरू सबैका निम्‍ति धन्‍यवाद दिन्‍छौं।
१ तिमोथी २:१-२
 सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु, कि सबै मानिसहरूका निम्‍ति नम्र-निवेदन, प्रार्थना र मध्‍यस्‍थ-बिन्‍ती र धन्‍यवाद चढ़ाइऊन्, राजाहरू र सबै उच्‍च पदमा भएकाहरूका निम्‍ति पनि, ताकि हामी निर्धक्‍क र शान्‍तिपूर्ण भएर हरप्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौं।
तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए। अनि येशूले मास्‍तिर नजर उठाएर भन्‍नुभयो, “हे पिता, म तपाईंलाई धन्‍यवाद दिन्‍छु, किनकि तपाईंले मेरो बिन्‍ती सुन्‍नुभयो।
 परमप्रभुमा धन्‍यवाद चढ़ाओ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्‍छ, र उहाँको करुणा सदासर्वदा रहिरहन्‍छ। इस्राएलले भनोस्‌, “उहाँको करुणा सदासर्वदा रहिरहन्‍छ।” हारूनको वंशले भनोस्‌, “उहाँको करुणा सदासर्वदा रहिरहन्‍छ।” परमप्रभुको भय मान्‍नेहरूले भनून्‌, “उहाँको करुणा सदासर्वदा रहिरहन्‍छ।” मनको वेदनामा मैले परमप्रभुलाई पुकारें, र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, र मलाई मुक्त गर्नुभयो। परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्‍छ, म भयभीत हुँदिनँ, मानिसले मलाई के गर्न सक्‍छ र? परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्‍छ, उहाँ मेरा सहायक हुनुहुन्‍छ। म मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्‍टिले हेर्नेछु। परमप्रभुको शरण लिनु मानिसहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्‍दा उत्तम हुन्‍छ। परमप्रभुको शरण लिनु शासकहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्‍दा उत्तम हुन्‍छ। सबै जातिहरूले मलाई घेरे, तर परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्‍ट पारें। तिनीहरूले मलाई हरेक दिशाबाट घेरे, तर परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्‍ट पारें। तिनीहरूले मलाई मौरीहरूले झैँ छोपे, तर काँढ़ाहरूमा लागेको आगोजस्‍तो शीघ्र निभिगए। परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्‍ट पारें। म बलपूर्वक पछाडि घचेटिएँ र लड्‌न लागेको थिएँ, तर परमप्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो भजन हुनुहुन्‍छ, र उहाँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। धर्मीहरूका पालमा हर्ष र विजयको गुञ्‍जन हुन्‍छ: “परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ! परमप्रभुको दाहिने बाहुली उचालिएको छ, परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ।” म मर्दिनँ, तर जीवित रहनेछु, र परमप्रभुले गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। परमप्रभुले मलाई कठोरतासाथ ताड़ना दिनुभएको छ, तर उहाँले मलाई मृत्‍युको वशमा सुम्‍पनुभएको छैन।
उहाँले तपाईंको मनोरथ पूरा गरून्‌, र तपाईंका सबै योजनाहरू सफल गराऊन्‌।
यस हेतुले कि मेरो मनले तपाईंको स्‍तुतिगान गरोस्‌, र चूप नलागोस्‌। हे परमप्रभु मेरा परमेश्‍वर, म सदासर्वदै, तपाईंमा धन्‍यवाद चढ़ाउनेछु।
धन्‍यवाद चढ़ाउँदै उहाँको सामुन्‍ने आऔं, भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौं।
२ कोरिन्थी 9:11
तिमीहरूको ठूलो उदारताको निम्‍ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्‍याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्‍वरमा चढ़ाउने धन्‍यवाद उत्‍पन्‍न गराउनेछ।
२ कोरिन्थी 2:14
तर परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रीष्‍टमा सधैँ विजयको निम्‍ति डोर्‍याउनुहुन्‍छ, र उहाँको ज्ञानको सुबास्‍ना हामीद्वारा हरेक स्‍थानमा फैलाउनुहुन्‍छ।
किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्‍ति हुन्‌। उहाँलाई नै सदासर्वदा महिमा होस्‌। आमेन।
परमप्रभुलाई धन्‍यवाद चढ़ाओ, उहाँका नाउँको पुकार गर, जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर।
तिनीहरू झ्‍यालखानबाट बाहिर निस्‍केर लिडियाको घरमा गए, र भाइहरूसँग भेटघाट गरेपछि उनीहरूलाई प्रोत्‍साहन दिई बिदा भए।